Aza atao ambanin-javatra ny fiantraikan'ny magazay biriky sy molotra | Martech Zone
Talata, Novambra 21, 2017 Alatsinainy, Novambra 20, 2017 Douglas Karr
Vao haingana izahay no nizara ohatra vitsivitsy momba ny fomba Enterprise IoT (Internet of Things) dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny fivarotana fivarotana antsinjarany. Nizara tantara vaovao tamiko ny zanako lahy tamin'ny antsinjarany izay nanondro antontan'isa somary manjombona momba ny fanokafana sy ny fanidiana ny fivarotana antsinjarany.
Na dia mitombo aza ny elanelan'ny fanidiana, zava-dehibe ny fanekena fa ity firenena ity dia manohy manokatra fivarotana antsinjarany bebe kokoa hatrany. Na i Amazon, ilay antsoina hoe mpamono antsinjarany aza, dia miara-miasa amin'ireo mpivarotra sy manokatra fivarotana azy manokana. Fa maninona Ny traikefan'ny mpanjifa. Ny zava-misy dia ny mpanjifa amerikanina dia mbola te hikasika ireo vokatra novidiny ary koa hamela azy ireo ny magazay - ary amin'ny fivarotana antsinjarany ihany no ahafahanao mahazo izany.
Mifanohitra amin'ny ankamaroan'ny hevitra, ny fivarotana biriky sy mortara dia mbola misy ary tsy handeha na aiza na aiza atsy ho atsy. Tsia, tsy fitantarana mampihetsi-po ity izay tsy miraharaha ny zava-misy marina, fa taratry ny fihevitr'ireo mpanjifa sy ny fomba fiasan'ny tsena nentin-drazana (ivelan'ny Internet) tato anatin'ny taona vitsivitsy, na eo aza ny fisian'ny fivarotana antsinjarany mitombo isan-taona . Rutgers University
Ny tombatombana ho an'ny taona 2018 dia mbola tetikasa maherin'ny 91.2% amin'ny varotra rehetra no hitranga ao amin'ny fivarotana antsinjarany, ary mamela 8.8% fotsiny amin'ny varotra mitranga an-tserasera
Ity infographic ity dia noforonin'i Ny mari-pahaizana momba ny zavakanto an-tserasera ao amin'ny oniversite Rutgers amin'ny fitantanana orinasa programa, ary asehoy ny statistika sy ny fomba ampifanarahan'ny fivarotana antsinjarany amin'ny fanatsarana ny serivisy ho an'ny mpanjifa, ny traikefan'ny mpanjifa, ny haitao finday, ny zava-misy mifangaro ary ny ambangovangon'ny magazay. Mety efa hitanao ny fiovana nitranga, toa ny efitrano fandraisam-bahiny no itovizan'ny magazay kokoa noho ny trano fitehirizam-bokatra.
Tags: gorodona ary-fetaSerivisy ho an'ny mpanjifaorinasa iotiotzava-misyfinday teknolojiaantsinjaranyfivarotana antsinjaranyrutgersoniversite rutgersfivarotana